Gbasara Anyị - Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd.
Lingshou County Xinfa Mineral Co., Ltd. guzobere na Eprel, 2002, dị na Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China. Anyị bụ ọkachamara emeputa nke mica ntụ ntụ dị mma, flakes agba, flakes composite, vermiculite wdg nwere ikike mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị 10,000 tọn. Companylọ ọrụ anyị kpuchiri mpaghara ihe dị ka 30,000㎡, ebe ndị na-ewu ụlọ na-ewe ihe karịrị 10,000㎡ na ụlọ ọfịs 1,200㎡. N'afọ 2003, ụlọ ọrụ anyị ka azara aha ha dị ka “priselọ ọrụ Na-edebe Nkwekọrịta & Nkwa Nkwa” nke belọ Ọrụ Mmebe na Azụmaahịa Hebei. N'afọ 2005, enyere ya ọkwa dịka “A pụrụ ịdabere na Ngalaba maka Nhazi Ogo Mma” site na Lingshou County Nchịkwa Nchịkwa Ọrụ; N’afọ 2009, ọ gafere akara asambodo njikwa sistemụ ISO9001: 2000.
Ngwá ụlọ ọrụ
Anyị nwere ugbu a 3 noo, 3 forkl onyinye na 1 ụgbọ ibu. Mkpokọta nrụpụta maka ụdị ngwaahịa dị iche iche eruola 18,000 tọn kwa afọ yana pasent 100 gafere na nyocha ngwaahịa.
Ngalaba na-ahụ maka ịdị mma nwere ngwa igwe eji eme ihe, ihe nkedo elektrọnik, igwe elektrọnik dị elu, ihu igwe na-ama jijiji, igbe ọkụ dị elu, igbe ọkpọkpọ, agitator, ihe ntụpọ PH, ihe nrụgide na-adịghị mma, ihe na-adịghị mma nke America, igwe ihe, obere elektrọniki eletriki, obere obere ihe igwe na ihe karịrị 200 sieves ọkọlọtọ na ngwa ule ndị ọzọ zuru oke.
Site na nguzobe, anyi na agba mbọ na R&D maka ngwa nke ngwaahịa anyị ma nyekwa ngwaahịa nnwale kachasị mma maka ụlọ ọrụ nyocha ihe karịrị 100 ka anyị chịkọbara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ọmụmụ usoro ihe iji nyere anyị aka nke ukwuu nyere ndị ahịa aka ibu ụzọ. Ngwa ahịa na ọrụ dị iche iche, na-eme ka mmụọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị dị ọcha "bylanahụ site na iguzosi ike n'ezi ihe na ịzụlite site na Innovation".
Site na nguzobe, anyi na agba mbọ na R&D maka ngwa nke ngwaahịa anyị ma nyekwa ngwaahịa nnwale kachasị mma maka ụlọ ọrụ nyocha ihe karịrị 100 ka anyị chịkọbara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ọmụmụ usoro ihe iji nyere anyị aka nke ukwuu nyere ndị ahịa aka ibu ụzọ. Ngwa ahịa na ọrụ dị iche iche, na-eme ka mmụọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị dị ọcha "bylanahụ site na iguzosi ike n'ezi ihe na ịzụlite site na Innovation"
Ngwaahịa mica ntụ ntụ, nke akpọrọ “發”, abụrụla nke a na-ewu ewu karịa na mpaghara 20 n'ime China na ọtụtụ mba na mpaghara na mpụga China, gụnyere mba sitere na European Union, South America na South East Asia.